☰ YUDE Online Learning
■ Online Learning
■ Course Catalog
■ Student Service
■ Register Info
■ News & Announcements
YUDE Online - Diploma in law
YUDE Online post graduate diploma in LAW
ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှာ LAW Diploma သင်တန်းများကို လုပ်ငန်းခွင်မပျက် ICT အသုံးပြု၍ စဉ်ဆက်မပြတ် အလွယ်တကူ သင်ယူလေ့လာနိုင်ရန်။
ချီးမြှင့်မည့် ဘွဲ့အမည် (ချီးမြင့်မည့်ဘွဲ့အမည်)
Diploma in Law (Online)
သင်တန်းလျှောက်လွှာတင်ခြင်းများကို www.yudeonline.com.mm မှတဆင့် registration လုပ်နိုင်သည်။ ဥပဒေပညာဌာနမှ သတ်မှတ်သည့် နေ့၊ ရက်၊ အချိန်တွင် သင်တန်းဝင်ခွင့် ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
YUDE Online အတွက် သင်ကြားမည့် သင်ခန်းစာများ၊ assignment များ၊ Tutorial test အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း များကို www.yudeonline.com.mm တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သင်တန်းသားများသည် အင်တာနက်ရှိသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ချိတ်ဆက်အသုံးပြု၍ သင်ခန်းစာများကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ Download ပြုလုပ်၍ လေ့လာခြင်း၊ Assignment များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ Tutorial Test များဖြေဆိုခြင်းတို့ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော Semester များအတွက် Announcements များတွင် ဖော်ပြထားသော အချိန်ကာအတွင်း လေ့လာဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
Module များအလိုက် သင်ခန်းစားများကို Powerpoint များ၊ သင်ထောက်ကူပြု Video များ၊ Audio ရှင်းလင်းချက်များ၊ Assignment များကို ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် (ဥပဒေပညာဌာန) မှ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သော ၀ါရင့်အငြိမ်းအစားဆရာမကြီးများနှင့် လက်ရှိဥပဒေပညာ ဌာနမှဆရာ၊ဆရာမများမှ ပြုစုရေးသားထည့်သွင်းပေးထားသည်။သင်တန်းသားများထံမှ ဖြေဆိုပေးပို့သော Assignment များကို သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများက အွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုကာ တိုက်ရိုက်စစ်ဆေး ကြည့်ရှုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
စာသင်နှစ်ကို Semester (၂)ခု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ Semester တစ်ခုလျှင် သင်တန်းကာလမှာ (၅)လ ဖြစ်ပြီး၊ Semester (၂)ခုအတွက် သင်တန်းကာလ (၁၀)လ ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသစ် စတင်ဖွင့်လှစ်မည့် ရက်၊ လ ကို ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ ဥပဒေပညာဌာနမှ သတ်မှတ်ပေး မည် ဖြစ်ပါသည်။
Semester တစ်ခုတွင်တက်ရောက်ခွင့် လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထို့ထက် ပိုသော လျှောက်ထားသူများ သည် Next Semester Month ကို ပြန်လည်စောင့်ရ မည်ဖြစ် ပါသည်။
ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ အွန်လိုင်း အသုံးပြု ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသည့် Diploma in Law သင်တန်းတွင် သင်ကြားမည့် ဘာသာရပ်များမှာ -
First Semester တွင် သင်ယူရမည့် Module များ
1. DL-6101 –Criminal Law and Procedure
2. DL-6102- Family Law
3. DL-6103 – Law of Contract and Tort
4. DL-6104- Business Law and Labour Law
5. DL-6105- Land Law and Revenue Law
Second Semester တွင် သင်ယူရမည့် Module များ
1. DL-6106- Civil Law and Procedure
2. DL-6107- Law of Evidence
3. DL-6108- Constitutional Law and Administrative Law
4. DL-6109- Pubic International Law
5. DL-6110 Term Paper စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
Diploma in Law Online သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းသားတစ်ဦးသည် အွန်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်ရသည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အတူ သင်ယူမည့် Module များအတွက်ပါ သင်တန်းကြေး ပေးသွင်းရသည်။
မှတ်ပုံတင်ကြေး - For both semester - ၁၀၀၀၀
သင်တန်းကြေး - For Each Semester - ၂၅၀၀၀၀၀/-
စာမေးပွဲကြေး - For both Semester - ၃၀၀၀၀၀/-
အွန်လိုင်းသင်တန်းသားများအတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရက်များကို အွန်လိုင်းမှနေ၍ ကြိုတင် အသိပေး ကြေငြာပေးသွားမည်။ ထိုနေ့ရက်များတွင် သင်တန်းသားများသည် သတ်မှတ်ချိန် အတွင်းဖြေဆိုရန် ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရက်မှာ (၅)ရက် သတ်မှတ်ပေးပြီး၊ တစ်ရက် တစ်သာသာနှုန်းဖြင့် ဖြေဆိုရမည်။ စာမေးပွဲအား ဥပဒေပညာဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်၊ လ တို့တွင် ဖြေဆိုရမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုချိန်မှာ (၃)နာရီ ဖြစ်ပါသည်။
တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ - တစ်ဘာသာလျှင် မိနစ် ၃၀ နှုန်း။
စနေနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့ - တစ်ဘာသာလျှင် တစ်နာရီ နှုန်း။